Ciidamada XDS iyo kuwa AMISOM oo saaka si buuxda ula wareegay degmada Galcad ee G/Galgaduud – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidamada XDS iyo kuwa AMISOM oo saaka si buuxda ula wareegay degmada Galcad ee G/Galgaduud
29th April 2016 MAREEG Af Soomaali 0
Cutubyo ka tirsan ciidanka XDS iyo kuwa AMISOM ayaa saaka si buuxda ula wareegay degmada Galcad ee gobolka Galgaduud kaddib markii ay ka faramaroojiyeen maleeshiyaadki Shabaab ee dhibaatada ba’an ku hayay bulshoweynta ku nool degmadaasi.
Ciidamadan oo wata gaadiidka gaashaaman ee dagaalka ayaa saaka ka soo ruuqaansaday tuulada BudBud oo 30 Kiilo Mitir dhinaca galbeed uga toosan degmada Galcad, iyadoo ciidamadu ay si nabadgelyo ah kula wareegeen degmada Galcad kaddib markii ay isaga baxeen maleeshiyaadkii Shabaab.
Bulshaweynta ku nool degmada Galcad oo qaati ka taagnaa maleeshiyaadka Shabaab ayaa si diirran u soo dhaweeyay ciidamada XDS iyo kuwa AMISOM, iyagoo isugu hambalyeeynaya neecowda gobanimo oo sideed sano kaddib ay heleen saaka.
Ciidamada ayaa baaritaano ka bilaabay xaafadaha ay ka koobantahay degmada Galcad, iyagoo dhinaca kalena fariisino ka sameystay duleeddada magaaladaasi, waxeyna ku sii raadjoogaan firxadka maleeshiyaadka Shabaab.
Ban the Bomb Tests
Wabiga Shabeelle oo ku fatahay deegaanno ka mid ah gobolka Sh/dhexe “Dhageyso”